दीपकराज जोशी सर्वोच्चमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै कार्यालय फर्के - समसामायिक | Kantipur TV HD
दीपकराज जोशी सर्वोच्चमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै कार्यालय फर्के
भाद्र २७, २०७५
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि बिदामा बसेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी सर्वोच्चमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै कार्यालय फर्केका छन् । जोशीको अदालत पुनरागमनले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत व्यक्तिको न्याय सम्पादनमा सहभागितालाई संसदले कसरी लिन्छ त ? एक रिपोर्ट -
संसदीय सुनुवाईबाट गत साउन १८ गते प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएयता जोशी बिदामा थिए । तर सोमबार ओमप्रकाश मिश्र संसदीय सुनुवाइ र राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर पदबहाली गर्न पुग्दा स्वागतका निम्ति जोशी सर्वोच्चमा उपस्थित थिए ।
मंगलबार त उनी कार्यालय समयमै अदालत पुगे, भलै उनलाइ मुद्दा तोकिएन ।
जोशीले राजीनामा नदिए वा संसदले महाभियोग नलगाएसम्म वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशी नै रहनेछन्, जसले मिश्रको अनुपस्थितिमा स्वतः कायममुकायम भइ प्रधानन्यायाधीशको सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । मिश्रको कार्यकाल आगामी पुसमै सकिनेछ भने जोशी अझै एक वर्ष रहनेछन् । त्यसपछि कायम मुकायम नेतृत्व जोशीकै हातमा जानेछ । त्यति मात्रै हैन्, चार महिनापछि जोशी फेरि प्रधानन्यायाधीशको दाौडमा सामेल हुन सक्नेछन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य ठहरिएका ब्यक्ति फेरि कायमुकाय प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था कति स्वाभाविक हो ? अनि आफैले अस्वीकृत गरेको व्यक्ति न्याय सम्पादनमा फर्किँदा संसदले कसरी लिन्छ ?
शैक्षिक योग्यता विवादित र न्यायिक इमान नभएको भन्दै संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत जोशी घर फर्कनुपर्ने कानुनी बाध्यता नभए पनि नैतिक प्रश्न कायम छ । अन्य न्यायाधीशले सँगै इजलासमा नबस्ने भनेमाचाहिँ जोशी थप नैतिक संकटमा पर्नेछन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएर पनि न्यायाधीश काममा फर्किएको यो नौलो घटना हो । तर गम्भीर आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिसकेपछि संसदले आफ्नो निर्णयको औचित्य आफैले सावित गर्न सक्नुपर्छ ।
कृषि विश्विद्यालयमा पढाइ भन्दा आन्दोलन बढी
लिफ्ट कत्तिको सुरक्षित छन् त ?
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सेनाको प्रस्ताव विवादग्रस्त
सरकारी जग्गा अपचलनको खेल - शुवर्ण शमसेरका आफन्तको हात
Kantipur Television Network Pvt. Ltd.
© 2017 Kantipur Digital Corp.